Chart nha | Stylelọ ahịa Style Rave
Ọha niile egosiri na ntụzịaka ahụ na-ezo aka nha ahụ na ọ bụghị nha nke uwe.
Jiri nha anyị n’okpuru kpebie nha gị. Y’oburu na ila n’agbata udiri abuo, nye ka pere mpe maka ihe kwesiri ma obu ibu karie ihe kwesiri ekwesi. Y’oburu n’omume gi nke ukwu na ukwu kwekoro nha abuo a choro, nye aka gosiputara n’omume gi.
** Ka ịgbanwee site na santimita rue sentimita asatọ, jiri 1 inch = 2.54cm**
Ntuziaka nke Ahụ
BSTR:: Ghafee akụkụ akụkụ ahụ zuru oke nke agbaji yana n'ofe ubu.
WAIST: Tụọ akụkụ slimmest akụkụ nke eke gị warara - n'elu gị otu na n'okpuru gị
Ozi: Tụọ akụkụ ya na mbara kachasị.
Jiri eserese nha anyị chọpụta ịchọpụta uwe ụmụ nwanyị na nha US maka uwe, ndị na-eme ọkụ, n'elu, sketị na ndị ọzọ. Iji chọta nha ziri ezi, buru ụzọ were ihe nrịba gị, hip na ukwu, na sentimita ma ọ bụ sentimita. Mgbe i nwere nha, chọta otu nke dabara adaba na nsonaazụ gị na eserese ndị dị n'elu.
Ichoro enyemaka ịhọrọ nha gị? Kpọtụrụ anyị shop@stylerave.com ya na aha ahia.
Laghachi na Store Style Rave